Dalxiisyada Xayawaanka Lakes Express ayaa Bilaabmay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean32 IspartaDalxiisyada Xayawaanka Lakes Express ayaa bilaabmay
25 / 10 / 2019 32 Isparta, 35 Izmir, Coast Mediterranean, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, Headline, TURKEY
yoolalku waxay bilaabeen duulimaadka safarka
Socdaalkii Lakes Express wuxuu bilaabmay: Wasiirka Turhan, Saldhigga Tareenka ee Isparta wuxuu imaanayaa safarkii ugu horeeyey ee Isparta-Izmir si uu u soo qaato quruxda Isparta umada iyo aduunkaba, si kor loogu qaado summada magaalada, nolosha dadka, wanaagga, heerarka nolosha ayaa sheegay inay fuliyeen adeegyo kor loogu qaadayo.
Ujeedadaas awgeed, safarka si loo bilaabo duulimaadka wareejinta Harooyinka Lacagta ah ee Turhan, xariiqa koowaad wuxuu bilaabay inuu ku adeego 1996'da, waqtigaas oo lagu noolaanayo khadkan ma ahan kaabayaal ku filan iyo aragti toona, ayuu raaciyay.
Sababtoo ah kaabayaasha tareenka ee ku dhawaad ​​nus qarni si ay u sharxaan taas oo aan xitaa ahayn ciddiyaha Turhan, ayaa yiri:
“Lakes Express, oo lagu bilaabay rajo weyn sawirka qabriga, ayaa lahaa qaybtiisa. Si loo bilaabo adeeg ku habboon kaabayaal tayo sare leh oo raaxo leh iyo jaangooyooyinka tareenka cusub ee 2008, Lakes Express waxay ahayd inay hakiso duullimaadyadeedii. Kaliya uma cusboonaysiin qadkaan markii aan ka tagnay. Waxaan bilownay abaabul waddo tareen oo buuxa dalka oo dhan. Ka dib 1950, celceliska 18 kiiloomitir kiiba kiiloo mitir ayaa laga dhisay dalkeenna sannad walba.Ta intii xukunkeenu socday, waxaan dhisnay celcelis ahaan tareenka celcelis ahaan 135 kiilomitir sanadkiiba. Khadadka laga tegay taxaddar la'aan ilaa suuska ayaa lagu beddelay kuwa casriga ah, tareennada sida kagni waxaa hadda lagu beddelayaa tareenno xawaare sare leh, oo waxaan ku xiriirnay qaaradaha sidii aan magaalooyinkeenna ugu xiri lahayn tareenka. Waxaa hadda suurtagal ah in London looga yimaad Beijing oo laga raaco tareenka. Shalay Ankara, waxaan saxeexnay heshiis isfaham oo ku saabsan tareenka ka tagaya Beijing ilaa London, gaar ahaan intii aan kulan la yeelanay maamulayaasha tareenka ee gobolada Bartamaha Aasiya. Waxaan rajeyneynaa in 6 uu tareenka ka raaco Shiinaha oo uu tagayo London bisha November iyada oo xaflad ay ka soo qeybgaleen maamulayaasha tareenka ee waddammada dhan ay marayaan waddadan. ”
Turhan wuxuu cadeeyay in dadka isticmaali doona Lakes Express inay arki doonaan farqiga u dhexeeya gadiidka tareenka iyo halka ay ka yimaadeen, wuxuuna yidhi, “Lakes Express waxay sii wadi doontaa inay ku adeegto kaabayaasheeda raaxo iyo amaan ah. Muuqaalkani waa mid lama huraan u noqon doona socdaalada u dhexeeya badda Mediterranean iyo Aegean. Cidna kama walwaleyso inaysan heli doonin tigidhada basaska markay tagayaan Izmir, Denizli, Burdur, Aydın. Waxaan rajeynayaa in adeegan xiisaha leh ay u anfici doonaan kuwa ka faa iidaysan doona adeeggan gobolkeena, gaar ahaan muwaadininta Isparta iyo Isparta, gaar ahaan Lakes Express. ”
"Waxaan ugu talogalnay inaan ku soo bandhigno Isparta tareenka gaari kara 200 kiiloomitir saacadiiba"
Turhan wuxuu carrabka ku adkeeyay in dadku ay garteen mashaariic waaweyn si ay u gaaraan qiimayaasha iyo qurxinta Isparta si raaxo leh, nabad ah iyo waqti gaaban iyo in ay ku wareejiyeen ku dhawaad ​​2,5 bilyan oo rodol maalgashiga gaadiidka iyo isgaarsiinta Isparta.
Turhan waxay kaloo xustay inay maalgashiyo muhiim ah ka sameeyeen wadooyinka tareenada ee Isparta waxayna sheegeen inay ugu talo galeen inay magaalada ku soo bandhigaan tareenka gaaray xowliga kiloomitir 200 saacaddii.
Ku dhawaad ​​dhamaadka mashruuca, waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa in maalgalinta mashruucan uu ku wareejiyo Turhan, qiyamka taariikhiga ah ee Isparta, qurxinta dabiiciga ah iyo wax soo saarka gobolka ee mashruucan ayaa kordhinaya qiimaha dakhliga muwaadinka uu sare u kici doono, ayuu raaciyay.
Isparta iyo qarankuba way u qalmaan, taas oo muujineysa in adeegyadan ay daaheen Turhan, ayaa yiri:
Hizmet A-dowlad-dowladeed, hogaamiyaha adduunka ayaa masraxa kasoo muuqday. Wuxuu adeegyadan isugu keenay ummaddeenna oo dhan. Annaga, koox ahaan, waxaan sii wadaynaa inaan la shaqeyno aragtida uu muujiyey. Sababtoo ah Isparta waa sharta Anatolia, waxaan isku dayeynaa inaan sameyno waxa ku habboon shaabaddan. Waa waajibkayaga ugu weyn ee waajibka ah inaan ilaalino, xafidno, horumarino, oo aan weligeen ilaalinno. Markay quseyso shaabaddan, waxaan sameyneynaa wadooyin, waxaan dhigeynaa tareemo, markii loo baahdana waxaan sii wadaynaa inaan ku darno bogag dahab ah taariikhdeena sida Howlgalka Nabadda. In kasta oo aan sii wadno halgankayaga madax-bannaanida, ayaannaan fursad u siin kuwa kuwa isha ku haya dalkeenna iyo kuwa qarka u saaran qarankeenna. Ilaa iyo inta ay jirto taageerada ummaddeenna iyo qalbiyadeenna iimaan ku garaacaya, ma jiro wax awood ah oo aan noo jilbi karin juqraafi ahaan, aamusi karno wicitaankeena salaadda oo aan calankayaga hoos u dhigno. Markii aan sidaa yeelno, waxaan gooynaynaa xuduntayada oo aan duurka ku dhignaa talo argaggixisanimo. Marka ay munaasib tahay, waxaan ognahay inaan miiska ka saarno guul dublamaasiyadeed. Waxaan sii wadi doonnaa inaan joogno garoonka, qeybinta iyo dhisidda garoonka sidoo kale waxaan caddeyneyna waxyaabaha argaggixisada ah go'aaminta. Sababtoo ah waxaan ka warqabnaa in dalkan hooyo uu yahay dhaxalka iyo aaminaada awoowayaasheen. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ka doodno xooggayaga miiska iyada oo ah go'aankeena duurka. Cidna kama shakiyo taas.
Turhan wuxuu u mahadceliyay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo kooxdiisu hogaankooda ku aadan hirgelinta adeegyo badan oo dalka ka jira.
Wasiirka Turhan, Isparta-Izmir lacagta Lakes Express £ 50 Mashruuca Beerta Qaranka ayaa qorsheeyay in laga dhiso agagaarka Saldhigga Isparta.
Pamukkale Express waxay bilaabi doontaa
Metrobusku wuxuu ka bilowday Dekedda
Raybus wuxuu bilaabay dardargelinta
Maanta ee Taariikhda: 20 Febraayo 1977 Tareenka Buluugga ah wuxuu Bilaabmayaa Socdaal
Mashruuca Tareenka Sare ee Eskişehir-Antalya
Lacag tigidhada Lakes Express
Qiimaha tigidhada tareenka ee Isparta Izmir